ယူရို ၄၀ မှ Eurostar ရထားဖြင့်လန်ဒန်မှအမ်စတာဒမ်သို့ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထားခရီးသွားဟော်လန် > ယူရို ၄၀ မှ Eurostar ရထားဖြင့်လန်ဒန်မှအမ်စတာဒမ်သို့
စာဖတ်ချိန်:7မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 14/05/2020)
ဥရောပမှာခရီးသွားမှလူကြိုက်အများဆုံးလမ်းကြောင်းတစ်ခုမှာလန်ဒန်ကနေအမ်စတာဒမ်ရန်ဖြစ်ပါသည်, ကျော်နဲ့အမြန်ခရီး4သန်းခရီးသည်နှစ်စဉ်ခရီးအောင်. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာ Eurostar မှတစ်ဆင့်ရထားဖြင့်ဖြစ်သည်, နှစ်ခုဥရောပမြို့တော်ဆက်သွယ်ထားသောမြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်း. ဤလမ်းကြောင်းသည်, ဖွင့်လှစ်ရာ 2018, ပိုက်ဆံနဲ့ save ရထားလမ်းခရီးသွားထောက်ပံ့သောအဆင်ပြေစေရန်ခံစားရန်ရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုဖြစ်နေဆဲ.
အောက်တွင်, သင်သည်သင်၏လန်ဒန်မြို့ရှိအမ်စတာဒမ် Eurostar ခရီးကိုစီမံရန်ကူညီရန်လိုအပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်ရှာနိုင်သည်.
ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုဖောက်သည်ပညာပေးရန်ရေးသားခဲ့ခြင်းနှင့်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးခဲ့ပါတယ်, ဈေးအသက်သာဆုံးရထားလက်မှတ်ဝက်ဘ်ဆိုက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ.
လန်ဒန်ရန်အမ်စတာဒမ်ကနေ Eurostar ရထား Times သတင်းစာ
အဆိုပါ Eurostar မကြာခဏပြေး, အထိနှင့်အတူ 16 အားလပ်ရက်ပေါ် မူတည်. တစ်နေ့လျှင်ထွက်ခွာခြင်းနှင့် တနင်္ဂနွေ. မည်သည့်နေ့တွင်မဆိုလန်ဒန်မှအမ်စတာဒမ်သို့ပထမဆုံးရထားသည်လန်ဒန်စိန့်မှထွက်ခွာသည်. Pancras မှာ 07:16 နှင့်စုစုပေါင်းကြာ3နာရီနှင့် 55 မိနစ်များ, အမ်စတာဒမ်ဗဟိုမှာသို့ရောက်ရှိလာ 12:11 (အမ်စတာဒမ် Centraal အမ်စတာဒမ်ဗဟိုဘူတာမှဒတ်ခ်ျနာမည်ဖြစ်ပါတယ်). ဤသည်ကိုမကြာခဏရရှိနိုင်ဈေးအပေါဆုံးလက်မှတ်တွေတစ်ခုဖြစ်သည်, သငျသညျစောစောထဖို့ဆန္ဒရှိနေလျှင်ဒါအချို့ကိုသင်ပိုက်ဆံနဲ့ save အရုဏ်၏ချိုးမှာထွက်ဦးနိုင်ပါတယ်.
လမ်းကြောင်းကြိမ်နီးပါးကာလအစဉ်အမြဲနာရီများမှာ, အရာအရွက်ကိုသင်ထွက်ခွာကြိမ်ရွေးချယ်စရာများများ. မှာညဥ့်ဦးစီးဌာနမှနောက်ဆုံးရထား 17:16 နှင့်ရောက်ရှိ 22:11, ဒတျချြမြို့တော်တစ်နှောင်းပိုင်းတွင်-ညဥ့်ရေစာကိုခံစားရုံလုံလောက်သောအချိန်အရာဖြစ်ပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ site Check သင်တစ်ဦးခလုတ်ကိုမျက်နှာပြင်ရဲ့ညာဘက်သို့မဟုတ်ပဲကလစ် SaveATrain.com ရှာတှေ့နိုငျရာ, အပြည့်အဝလန်ဒန်မှအမ်စတာဒမ် Eurostar အချိန်ဇယားသည်.
အဆိုပါ Eurostar တွင်သင့်လက်မှတ် booking
အားလုံး Eurostar ရထားလက်မှတ်အနည်းဆုံးနှစ်ခုအပိုင်းပိုင်းပါဝင်သည် ဝန်စည် နှင့်လက်အိတ်. သငျသညျအိတ်ကို၏အတော်လေးတွေအများကြီးနှင့်အတူခရီးသွားနေပါလျှင်, သင်သည်လည်းသင်ပိုမိုပစ္စည်းများယူဆောင်လာရန်ခွင့်ပြုတဲ့လက်မှတ်များအတွက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်. ဘတ်ဂျက်လေကြောင်းလိုင်းကသူတို့ကနဦးကြိုတင်စာရင်းသွင်းဘို့လျော့နည်းအခကြေးငွေကောက်ခံစေခြင်းငှါနေစဉ်, အိတ်အခကြေးငွေနှင့်ထိုင်ခုံရွေးချယ်မှုစွဲချက်လျင်မြန်စွာတက် add, သငျသညျလျော့နည်းတစ်ခုလုံးအများကြီးပိုပေးဆောင်တက်အဆုံးသတ်ထားတဲ့နည်းလမ်းများ.
ဤလန်ဒန်မှအမ်စတာဒမ်သို့ခရီးအတွက်လက်မှတ်စျေးနှုန်းများသည်အပြောင်းအလဲမြန်လေ့ရှိသည်, မကြာမီသင်နေနိုင်ကြသကဲ့သို့လက်မှတ်များဝယ်ယူအကြံပြုကျနော်တို့ဒါ. ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော, ဤအလက်မှတ်တွေကြိုတင်သုံးလရောင်းချမှုအပေါ်သွားပါ, အခါသမယပေါ်တွင်သင်ခရီးသွားသင့်ရဲ့နေ့စွဲမတိုင်မီခြောက်လမှသူတို့ကိုတက်ရှာတှေ့နိုငျသျောလညျး. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သုံးပြီးအကြံပြု ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားကမ္ဘာကြီးကိုရထားလက်မှတ်တွေက်ဘ်ဆိုက် သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်တွေရှာပြီးစာအုပ်ဆိုင်, အရာအလိုအလြောကျသငျသညျဖြစ်နိုင်သောစျေးနှုန်းစျေးနှုန်းအရအားလုံးရရှိနိုင်စာရင်းရှာဖွေ, အာမခံ.
Eurostar ရထားဖြင့် London မှ Amsterdam သို့ London စျေးသို့လက်မှတ်အမျိုးအစားများ
အဆိုပါ Eurostar ရထားသင့်ရဲ့ဘတ်ဂျက်ပေါ်မူတည်ပြီးသုံး-class ကို cabin လည်ပတ်. သူတို့အဘို့ရိုးရှင်းစွာတယောက်ကိုတယောက်အရပျမှရရန်ရှာဖွေနေ, ဒုတိယလူတန်းစားလက်မှတ်တွေသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်. စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွားအပေါ်သူများသည်အစားနျ Standard ပရီးမီးယားလိဂ်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးပရီးမီးယားလိဂ်လက်မှတ်ပိုနှစ်သက်စေခြင်းငှါ, သင်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားနည်းပြ၌ထိုင်နှင့်သင့်ခရီးစဉ်အတွင်းအစာစားပေးခွင့်ပြုပါနှစ်ဦးစလုံး၏.
ကျနော်တို့ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့င့်အဖြစ်, ရောင်းစျေးသတ်မှတ်ကွဲပြားမှုများသင့်ရဲ့ခရီးသွားရက်စွဲများအရသိရသည်, ဒါကြောင့်သင်ရထားလက်မှတ်ကိုချက်ချင်းပဲရရှိနိုင်မှုဖွင့်သည်နှင့်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းပါလိမ့်မယ်. If you book far enough in advance, သငျသညျအကွောငျးကိုလစာမှရှာနေပါလိမ့်မယ် 92 ဒေါ်လာအသွားအပြန်, သို့မဟုတ်အကြောင်းကို 46 ဒေါ်လာတလမ်း. ပြီးခဲ့သည့်တစ်မိနစ်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းနေစျေးနှုန်းများကောင်းကင်ပြာမြင့်မောင်းနိုင်ပါတယ်, ကုန်ကျစရိတ်နီးပါးအကြာတွင်သင်သည်သင်၏လက်မှတ်ဝယ်ဖို့နှစ်ဆနှင့်အတူ.
ထိုနောက်မေလကနေကိုသတိပြုပါ, ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့စိန့်ဖို့အမ်စတာဒမ်ဗဟိုဘူတာကနေတိုက်ရိုက်ရထား. Pancras operating စတင်မည်, မူသောသင်တို့အပြန်ခရီးပေါ်တွင်သင်ခရီးသွားအချိန်နာရီပေါင်းများစွာကယ်တင်မည်. ဒါ့အပြင်ရိုတာဒမ်မှတိုက်ရိုက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုနေကြသည်စတင်. ဤဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်းလက်ရှိစျေးနှုန်းထက်စျေးနှုန်းချိုသာဖြစ်လိမ့်မည်.
လက်မှတ်ခများအမျိုးအစား အာမင် ကန့်သတ်
ငွေပြန်မအမ်းပါ. ရထားထွက်ခွာခြင်းမပြုမီ, သင်သည်သင်၏လက်မှတ်ဖလှယ်နိုင်ပါတယ်. တစ်ပြောင်းလဲမှုကြေး 40 ယူရိုနှင့်ခခြားနားချက်သက်ဆိုင်. အသစ်ကလက်မှတ်မူရင်းလက်မှတ်ထက်လျော့နည်းစျေးကြီးသည်ဆိုပါက, စျေးနှုန်းကွာခြားချက်ပြန်အမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
အဆင့်မြှင့်ထိုင်ခုံကပို legroom နှင့်ပရီမီယံအတွေ့အကြုံကို feature
ငွေပြန်မအမ်းပါ. ရထားထွက်ခွာခြင်းမပြုမီ, သင်သည်သင်၏လက်မှတ်ဖလှယ်နိုင်ပါတယ်. တစ်ပြောင်းလဲမှုကြေး 50 ယူရိုနှင့်ခခြားနားချက်သက်ဆိုင်. အသစ်ကလက်မှတ်မူရင်းလက်မှတ်ထက်လျော့နည်းစျေးကြီးသည်ဆိုပါက, စျေးနှုန်းကွာခြားချက်ပြန်အမ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ.
ထွက်ခွာမီသီးသန့် Lounge မှ Access ကို
အခမဲ့ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်ထိန့်အသတ်ဖလှယ်မှု 60 ဗြိတိန်နိုင်ငံအကြားအားလုံးလမ်းကြောင်းအပေါ်ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်ရက်ပေါင်း, ပြင်သစ်နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံ.
အခမဲ့ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့်နယ်သာလန်တို့အကြားတိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းအပေါ်ထွက်ခွာသည်အထိန့်အသတ်ဖလှယ်မှုတက်, အဆိုပါသွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်းအပေါ်ပေါင်းအခမဲ့ဖလှယ်မှု (ဘရပ်ဆဲလ်ကနေတဆင့် Thalys / Eurostar) ထွက်ခွာအထိ.
အဆိုပါ Eurostar တစ်ရထားလမ်း pass ကိုင်ထားသောသူတို့အားမရရှိနိုင်သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ဒါဟာထိုက်တန်, ဒါကြောင့်သင်ဤခရီးတစ်ခုဖြားယောင်းပြီးစျေးနှုန်းသက်သာတဲ့စေလိုလျှင်, ကြိုတင်မဲအတွက်သင့်ရဲ့ရထားလက်မှတ်ကိုဝယ်. သငျသညျအမြိုးမြိုးသောဝက်ဘ်ဆိုက်များမှာအွန်လိုင်းရထားလက်မှတ်တွေကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်, အဲဒီဝက်ဘ်ဆိုက်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် Eurostar ရထားလက်မှတ်များ၏စျေးနှုန်းများမြင့်တက်ပြသသော်လည်း တစ်ဦးကရထားဘ်ဆိုဒ်ကို Save.
မြို့တော်ပြီးတာနဲ့, သငျသညျကွဲပြားခြားနားသောအမ်စတာဒမ်ရထား၏နံပါတ်ကနေတစ်ဆင့် မှစ. ဆက်သွယ်နိုင်သည်. မြန်နှုန်းမြင့်ရထားဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုက်ကြီးတစ်လျှောက်ရှိနေရာအတော်များများသို့လည်းကမ်းလှမ်းသည်.
အမ်စတာဒမ်မှ Bielefeld ရထားစျေးနှုန်းများ
လန်ဒန်မှအမ်စတာဒမ်သို့ရန် Eurostar ရထားပေါ်တွင်
onboard ပြီးတာနဲ့, လန်ဒန်မှအမ်စတာဒမ်သို့ရထားဖြင့်သွားသောခရီးသည်စုစုပေါင်းခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ဖြစ်သည်3နာရီနှင့် 52 မိနစ်များ. သင့်ရဲ့ Pre-ထွက်ခွာဆိုက်ရောက်နှင့်အတူပေါင်းလိုက်သော, သင်၏စုစုပေါင်းခရီးအချိန်န်းကျင်ရှိလိမ့်မည် 4.5 နာရီ.
ရထားသူ့ဟာသူသငျသညျငွိမျဝနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်စားရန်ခွင့်ပြုစံထိုင်ခုံအဖြစ်ကျောက်ပြားကိုတပ်ဆင်ထား. ဤရွေ့ကားစောစောထစာအုပ်ဆိုင်လေ့, သော်လည်း, ဒါကြောင့်သင်ကချင်ပါတယ်ဘာမယ်ဆိုရင်ကြိုတင်ကောက်ဖို့သေချာအောင်. မည်သို့ပင်သင်ထိုင်ဘယ်မှာ၏, သင်သည်သင်၏ devices တွေကိုအားသွင်းဖို့ကောင်းသော legroom နှင့်ပလပ်ရှိသည်ဖို့အာမခံပါတယ်.
ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, အခမဲ့ရှိပါတယ် Wi-Fi onboard, သင်တို့ရှိသမျှသည်သင့်အီးမေးလ်နှင့်လူမှုရေးမီဒီယာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်အတူတက်စောင့်ရှောက်နိုင်အောင်. သင့်ရဲ့လက်မှတ်ပေါ် မူတည်., သငျသညျကိုလညျးထမင်းစားခန်းနည်းပြဦးနိုင်ပါတယ်, သငျသညျအစာကိုရှာတှေ့နိုငျဘယ်မှာ, အချိုရည် နှင့်မုန်. သင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးအတန်းအစားလေယာဉ်ထဲမှာထိုင်နေတယ်ဆိုရင်, အစားအစာသင့်ရဲ့ထိုင်ခုံကိုတိုက်ရိုက်ယူဆောင်ပါလိမ့်မည်.
ဆိုက်ရောက်အပေါ်သို့, နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထိန်းချုပ်မှုမှတဆင့်သွားကြဖို့မလိုအပ်ရှိပါတယ်, Brexit နှင့်အီးယူအနေဖြင့်ဗြိတိန်၏ဖယ်ရှားရေးဤဝန်ဆောင်မှုများကိုပြောင်းလဲစေခြင်းငှါအပြီးသော်လည်း. သင်သည်သင်၏ခရီးစတင်မတိုင်မီဒေသခံဥပဒေများစစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ.
လန်ဒန် Antwerp ရထားစျေးနှုန်းများ
လန်ဒန်မှ Lille ရထားစျေးနှုန်းများ
Strasbourg to London London ရထားစျေးနှုန်းများ
London မှ Rotterdam ရထားစျေးနှုန်း
ဒါပေါ့, အစစ်အမှန်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုတိတိကျကျဥရောပအကောင်းဆုံးရထားခရီးသွားမှတဆင့်ကြုံတွေ့လျက်ရှိသည်အဘယ်ကြောင့် – နောက်ဆုံးတော့, ဒီကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်တိုက်ကြီးလေယာဉ်ဖြင့်လွယ်ကူစွာသွားလာလမ်းကြောင်းဖြစ်ပါသည်, ကား, သို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကား. သို့သျောလညျး, ရိုင်းရှုခင်းအဖြစ်စိတ်ကူးယဉ်အဖြစ်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုရထားစီးပေါ်တွင်သင်၏ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်ရှိပါတယ်, နှင့်ပထမဦးဆုံးအချိန်ခရီးသွားများအတွက်ယာဉ်ပေါ်တွင်ရထားဖွယ်ရှိနေသည်ထက်ပိုမိုအဆင်ပြေဘာမျှမကထွက်ခွာမယ့်မတိုင်မီနီးပါးရှိတယ်. ဤသည်ဥရောပရဲ့လေဆိပ်မှနက်ရှိုင်းသောဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါသည်, အဆင့်မြင့် check-in အချိန်နှစ်နာရီ၏ပိုလျှံ၌တည်ရှိ၏နှင့်သင်လေဆိပ်တည်နေရာခရီးသည်အပိုဆောင်းအချိန်နှင့်ပိုက်ဆံဖြုန်းဘယ်မှာ.
ခရီးသွားအချိန်စကားပြောသော, ဥရောပက၎င်း၏မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလမ်းများအတွက်ကြီးမှူးမတ်နေသည်, အရာယခုအချိန်အထိသူ့ရဲ့အကွေ့အကောက်များသောကားလမ်းတစတစ. တိုက်ကြီးတစ်လျှောက်လုံးရထားမြန်ဆန်မကြာခဏတိုက်ရိုက်များမှာ, အရာရှာဖွေစူးစမ်းလျော့နည်းအချိန်ခရီးသည်နှင့်ပိုပြီးအချိန်ကိုဆိုလိုတယ်.
မီးရထားဘူတာလည်းသူတို့မကြာခဏမြို့လယ်အတွင်းပိုင်းတည်ဆောက်ထားကြသည်အဖြစ်ကောင်းစွာ-တည်ရှိသောခံရအကျိုးအတွက်ရှိ. သူတို့ကများသောအားဖြင့်လမ်းကြောင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏အပေါ်တစ်နေ့လျှင်မျိုးစုံထွက်ခွာကြိမ်ပေး, သင်အမြဲခရီးသွားတစ်ခု option ကိုရပါလိမ့်မယ်အရာနည်းလမ်းများ.
နောက်ဆုံး, ရထားလက်မှတ်တွေကိုပိုပြီးအားလုံးပါဝင်နိုင်များမှာ, သငျသညျကြီးမားကျယ်ပြအပိုဆောင်းကြေးပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲအိတ်ဆောင်ကြဉ်းနှင့်သင့်ထိုင်ခုံရွေးချယ်ဖို့ခွင့်ပြု.
ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကြောင်းပြောရန်ဖြစ်ပါသည်, ဥရောပခရီးသွားများအတွက်အများအပြားရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်စဉ်, ဘာမျှမကောင်းကျိုးကိုဟောင်းများကိုရထားခရီး beats.
Frankfurt မှ London သို့ရထားစျေးနှုန်းများ
လန်ဒန်မှ Moutiers ရထားစျေးနှုန်းများ
Marseilles to London Train စျေးနှုန်း
သင်၏လန်ဒန်အတွက်ရထားဖြင့် Save A Train ဖြင့်လက်မှတ်များကိုရထားဖြင့် Book ထားပါ
လူအပေါင်းတို့၏ရန်စာအုပ်လက်မှတ်တွေမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကိုရှာရန် ဥရောပရဲ့အကောင်းဆုံးနေရာများ, အပါအဝင် ဘယ်လ်ဂျီယံ, အီတလီ, ဆွစ်ဇာလန် ပြီးနောက် ဗြိတိန်နိုင်ငံ (Eurostar နှင့်အတူလန်ဒန်ကနေအမ်စတာဒမ်မှရထားအပါအဝငျ). ကျွန်ုပ်တို့၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ် ပိုက်ဆံကယ်တင် အားလုံးလက်မှတ်တွေပေါ်နှင့်မျှမတို့ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေများပါဝင်သည်. သငျသညျလစာပေးရန်မျိုးစုံနည်းလမ်းတွေကိုလက်ခံခြင်းဖြင့်ဝယ်ယူရန်တို့အတွက်ကျနော်တို့လွယ်ကူပါတယ်လုပ်, ခရက်ဒစ်ကဒ်အပါအဝင်, Giropay, အကောင်းဆုံးကတော့အများအပြားကပို.
ဒါကြောင့်, ခရီးသွားလာမှုအတွက်သမျှသင့်ရဲ့အကြောင်းပြချက်, သင်တစ်ဦးတည်းခရီးသွားနေရှိမရှိသို့မဟုတ်အခြားသူများနှင့်အတူ, Save Train တွင်ရထားလက်မှတ်များကိုရှာဖွေရန်မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူပါ, သောနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းများကမ်းလှမ်း, အာမခံ.
စာအုပ်ရှာနေ? ယူ3မိနစ်နှင့်ပေါ်တွင်သင်၏လန်ဒန်အမ်စတာဒမ်မှရထားစီးများအတွက်လက်မှတ်တှေ့ www.saveatrain.com . သငျသညျခရီးမှချင်ပါတယ်သောနေ့စွဲနှင့်အချိန်အတွက်ဖြည့်ပါ, နှင့်ငါတို့သည်သင်တို့၏ခရီးများအတွက်အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့်သင်တို့ကိုပေးသွားမှာပါ.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့? ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-amsterdam-direct-train%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
#stpancras amsterdamcentraal europeantravel လန်ဒန် longtrainjourneys ရထားခရီးသွား travelamsterdam eng